चुनाब नजिकीदै गर्दा पाटीका नेताहरु कहाँ व्यस्त ? प्रधानमन्त्री देउवा चुनावपछिमात्रै राजधानी फर्किने - Nepal News - Latest News from Nepal
चुनाब नजिकीदै गर्दा पाटीका नेताहरु कहाँ व्यस्त ? प्रधानमन्त्री देउवा चुनावपछिमात्रै राजधानी फर्किने
By nepalnews	 Last updated Dec 2, 2017
काठमाडौं, १६ मंसिर । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन समय शुरु हुनै लाग्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको व्यस्तता ह्वात्तै बढेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्षनेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर अरु उम्मेदवारका लागि भोट मागिदिन देश दौडाहामा छन् ।
देउवा सुदूरपश्चिममा व्यस्त
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शुक्रबारदेखि नै राजधानी बाहिर छन् । सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा व्यस्त प्रधानमन्त्री देउवा अब निर्वाचनपछि मात्रै काठमाडौं फर्किने उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए ।
देउवा आज कञ्चनपुरका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनी शुक्रबार डोटी, अछाम र कैलालीका कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । कैलालीमा देउवा पत्नी आरजु राणा उम्मेदवार छिन् । देउवा आफै डडेलधुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् ।
केपी ओली र प्रचण्ड कता छन् र?
यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि गृह जिल्ला झापामा छन् । उनी आज झापाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँगै मोरङ, उदयपुर र सुनसरीका कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।
आइतबार चितवन र नवलपरासीका कार्यक्रममा सहभागी भएर आइतबार बेलुका काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको ओलीका प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनको चुनावी कार्यक्रम छाडेर काठमाडौं आएका छन् । उनी आज काठमाडौं र ललितपुरका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।
शनिबार माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं(२ र पम्फा भुसालको निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर(३ का कार्यक्रममा प्रचण्ड सहभागी हुँदैछन् ।
काठमाडौं र ललितपुरको कार्यक्रम सकेर उनी शनिबारै कपिलवस्तु प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रचण्डका प्रेस संयोजक मनहरी तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी नेता चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार छन् । प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बलदेव राजनीतिक सल्लाहकारसमेत थिए । उनी कांग्रेस नेता एवम् भारतका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्रदीप पौडेलको तनहुँस्थित घरमा बम विष्फोट
भोलि हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावको तयारी पूरा